Chọpụta ihe niile gbasara ụbọchị anaghị eme ihe ike - World March
Chọpụta ihe niile banyere ụbọchị enweghị ike
Mbido » Chọpụta ihe niile banyere ụbọchị enweghị ike
Ime ihe ike a jiri mee ihe iji dozie esemokwu ụfọdụ na akụkọ ihe mere eme emewo ka nnukwu nsogbu dị n'etiti ọdịbendị na ọdịbendị dị iche iche. Ugbu a, òtù dịgasị iche iche na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji kwalite ọdịdị dị iche iche na-emepụta ihe ndị dị ka ụbọchị nke emeghị ihe na ụbọchị yiri nke ahụ, metụtara isiokwu ahụ. N'ime otu afọ, anyị nwere ike ịchọta ụbọchị dị iche iche na-achọ ime ka ị mara nsogbu ndị dị mkpa. N'ime ụbọchị ndị metụtara ime ihe ike, ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị dị ka ụbọchị ụwa nke enweghị ike.
Emerela akụkọ ihe mere eme na agha, mgbagha ndị na-adịghị agwụ aghara na mmebi nke ikike mmadụ. Alaeze Ukwu na e kere site na mbibi nke obodo nta, imebi nke nnwere onwe na n'ịbụ ohu nke ndụ mmadụ. Dabere na akụkọ ihe mere eme oge mepee ha esorowo dị iche iche, oha owuwu na mmegbu, na ọ bụ ezie na ọtụtụ nkebi n'ọdịbendị ụfọdụ mepụtara ozu n'ihi na nkwalite nke ikike, e nwere mgbe niile dị iche iche na nọgidere na-abụghị iwu n'akụkụ peeji, na-eme mwepu na ime ihe ike megide ha.
1 Kedu ụbọchị ndị na-enweghị isi?
2 2 Oktoba: Ụbọchị Mba Nile nke Na-adịghị
2.1 Gini mere ubochi udo na udo?
3 Nọmba ụbọchị 25 nke enweghị ike imegide ụmụ nwanyị
3.1 Ihe kpatara idi nke a: November 25 day of nonviolence against women
3.2 Gịnị mere ị ga-eji gbaa ụbọchị November 25 emeghị ememe?
4 January 30 akwụkwọ ụbọchị nke enweghị ike na udo
4.1 Gịnị mere ụbọchị nhụsianya na udo e mere na 30 na January họọrọ n'ụlọ akwụkwọ?
5 19 November ụbọchị ụwa n'emeghị ihe ike megide ụmụ na ntorobịa
5.1 Ụbọchị zuru ụwa ọnụ nke enweghị nkwenye na igbochi mmegbu na iyi egwu
5.2 Ndị na-egosi ụmụaka ime ihe ike
6 Nkwupụta ikpeazụ na ụbọchị nke ime ihe ike megide enweghị ike
7 Spain na-eduga njem ụwa maka ụbọchị ụwa nke enweghị nkwenye
Kedu ụbọchị ndị na-enweghị isi?
Mmekọrịta mmekọrịta na njikọ ụbọchị ụwa nke emeghị ihe E nwere ọtụtụ. E nwekwara ọtụtụ ụbọchị nke enweghị ike na kalenda, na-elekwasị anya n'ọtụtụ dịgasị iche iche, dika:
Ụbọchị 25 na-emeghị ihe megide ụmụ nwanyị
Ụbọchị ụwa nke emeghị ihe ọ bụla, nke dị na 2 nke October
The 30 nke Jenụwarị, Ụbọchị School nke Nkwụsịghị nke na anyị ekwesịghị ịgbagwoju anya ụbọchị nwata
Ụbọchị Mba Nile nke Nwepụghị Udo na Udo.
Ọbụna ha na-arụ ọrụ dị iche iche ubi nke okwu, ha tinye mgbalị ha na Iguzogide-eme ihe ike dị iche iche ndi na nwere otu ihe mgbaru ọsọ:-ekwe omume nke na-agwụcha ọ bụla ihe ike na omume nke na-adị n'ime ụwa, na-eme udo iru niile akụkụ nke mbara ala, ma otu a ka ụmụ amaala nke otu nwere ike inwe ikike na ọrụ ndị ahụ
2 Oktoba: Ụbọchị Mba Nile nke Na-adịghị
Ụbọchị ụwa nke emeghị ihe A na-eme ememe ncheta 2 nke ọnwa, ebe ọ bụ oge ememe ọmụmụ nke Mahatma Gandhi. Ọ bụkwa na nkà ihe ọmụma nke Gandhi dabeere na iji mkparịta ụka maka mkpebi nke esemokwu ọ bụla.
Ọ bụ 15 nke June nke afọ 2007, mgbe General Assembly of the United Nations, kwupụtara site na mkpebi 61 / 271, na 2 nke ọnwa October agaghị emeghere ụbọchị. A na-eji ụbọchị a na-eme ihe na-emeghị eme ihe dị ka ebe a na-ezo aka n'ụwa iji mee ememe ncheta ndị dị ebube dị iche iche bụ ndị lụworo ọgụ n'ime ndụ ha iji nweta ọha mmadụ ka mma.
Gini mere ubochi udo na udo?
Omenala nke a na-etinye na Ụbọchị Ụbọchị Ụwa nke Na-emeghị Ihe Ọhụụ na-elekwasị anya dị ka agha maka nnwere onwe na mgbanwe mmekọrịta ọha na eze, n'ihi na ihe e bu n'obi bụ ichekwa ndụ mmadụ site na iji udo dịka ngwá ọrụ.
Ọtụtụ ndị na-eche ihe ụbọchị ụbụrụ na-adịghị, na ihe mere a na-eji kwuo ụbọchị udo na enweghị nkwupụta. O bu kwa na ndi okachamara nwere International Day of Nonviolence, nyere aka ime ka uwa mara ihe banyere oke ojiji nke ime ihe ike n'ime mkpebi agha n'etiti mba na n'ime ha.
Ya mere, October 2 ụbọchị nke na-abụghị ime ihe ike, bụ ohere dị iche iche na òtù jikwaa ihe ndị na-egosi oké ime ihe ike na ụwa, ma na na subliminally. Iji na-ekwu na nke a ụbọchị nke Nonviolence ifịk ifịk i nwere ike isonye na ngagharị mgbasa haziri gafee ụwa, ma ọ bụ iso na-akpakọrịta na-arụ ọrụ ụlọ kee ụbọchị nke udo na Nonviolence site mwekota ngwaọrụ na nkwanye ùgwù.
N'ihi nke a, ọ bụrụ na ịchọrọ isonye na ụbọchị October 2 n'emeghị ihe n'ememe dị iche iche dị iche iche na-ewere ọnọdụ na obodo na obodo, ọ kacha mma ịbịaru otu mkpakọrịta metụtara ụbọchị nke enweghị ike na udo ma nye ha ọrụ n'ime ha.
Ọ dị mkpa ịmara ụbọchị ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe mgbagwoju anya na-eche na ọ bụ ụbọchị November 2 ụbọchị mba na-adịghị eme ihe, mgbe anyị kwesịrị imesi ike, na ọ bụ 2 nke October. Ọ bụ na mgbe ụfọdụ ị na-achọta ozi na-ezighị ezi na Intaneti nwere ike iduga ọgba aghara.
Nọmba ụbọchị 25 nke enweghị ike imegide ụmụ nwanyị
Isiokwu a bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa ma dị ugbu a n'ọnụ ụwa dum. Ihe kpatara ya bụ na ime ihe ike a na-elekwasị anya na ụmụ nwanyị bụ otu n'ime ihe otiti ndị na-eme ka o siere ndị mmepeanya ike ịga n'ihu n'ịdị n'otu.
El Ụbọchị nke ọnwa 25 nke ọnwa mba ụwa megide ime ihe ike megide ụmụ nwanyị, ọ bu n'obi ime ka a hụ ụdị ihe ike nile a na-arụ n'ìgwè a nakwa na n'ọtụtụ oge, a na-eleghara anya ma ọ bụ na-agbachi nkịtị.
Ihe kpatara idi nke a: November 25 day of nonviolence against women
Ime ihe ike megide ụmụ nwanyị na-agụnye omume na ọnọdụ ndị dị ka ime ihe ike nwoke, ime ihe ike obstetric, ịgba aghara, mmeko nwoke ma ọ bụ ụgwọ ọrụ ụgwọ, n'etiti ndị ọzọ.
Ọnọdụ ndị a niile pụtara na a na-ele ndị inyom anya dị ka ndị dị ala na ọtụtụ akụkụ ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke, ma ọ bụ na e kenyere ha ọrụ nwoke na nwanyị maka naanị ịbụ ndị inyom, dị ka ọrụ onye na-elekọta ma ọ bụ nwunye nwanyị.
Gịnị mere ị ga-eji gbaa ụbọchị November 25 emeghị ememe?
Ime ihe ike nke nwoke na nwanyị nwere bụ nke kachasị ebe niile, ịlụ ọgụ megide ya. N'afọ 1993, Nkwupụta Ntuziaka Maka Mwepụ nke Ime Ihe Ike megide Ụmụ nwanyị nyere site na UN General Assembly. A na-atụle ya na iji kwusi okwu nke Ụbọchị 25 nke enweghị ọdịmma na udo Ọ dị mkpa na ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị (ndị bụcha ihe mejupụtara ọkara nke ụwa) na-ebi ndụ n'atụghị egwu ime ihe ike n’ụlọ, n'ime ọha mmadụ nke nchekwa na nke ziri ezi.
Ma mgbe ọ bụ eziokwu na ebe 25 November 2017 ime ihe ike amalitela na-enweta ụfọdụ na-enwe ọganihu na-azụ mmata nke okwu a ruo mgbe ikike na-adabaghị, ọtụtụ ndị weere na zuru ụwa ọnụ ụlọ ọrụ na-agaghị na-enwe ọganihu pụtara na equitably kwupụta a nke omume, dabere na ụkpụrụ omume ziri ezi na ndidi.
January 30 akwụkwọ ụbọchị nke enweghị ike na udo
The January 30 ụbọchị agụmakwụkwọ na udo A na-eme ememe ncheta ọnwụ nke Mahatma Gandhi, bụ onye ndú mba na nke mmụọ nke India. A na-eme ememe ụbọchị a site na afọ 1964, ma ọ bụ ruo n'afọ 1993 mgbe UN ghọtara ya.
El Ụbọchị January nke International 30 Na-enweghị Njikere, omume dị iche iche na-eme n'ụlọ akwụkwọ iji kwalite udo n'ụwa. Ọ bụ maka ụbọchị ụlọ akwụkwọ a nke enweghị ime ihe ike na udo iji mee ihe omume, dị ka akụkọ ụbọchị nke udo na nonviolence, ma ọ bụ egwu metụtara udo ka a na-edekwa ma na-ekwu okwu banyere ọnọdụ a na-ebi na mba ma ọ bụ n'ebe ụwa.
Gịnị mere ụbọchị nhụsianya na udo e mere na 30 na January họọrọ n'ụlọ akwụkwọ?
Ubochi mmuta a choputara ubochi a iji mee ihe di iche iche na umuaka. A na-enwekarị ụbọchị ndị a n'oge nwata na isi mmalite, ọ bu n'obi ka ụmụ ntakịrị mara ndị nnọchite anya ọnụ ọgụgụ nke arụmụka na enweghị udo. Otu n'ime ọnụ ọgụgụ kachasị anya bụ Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, mama Mary Teresa nke Calcutta ma ọ bụ Martin Luther King.
Ọ dị mkpa na-arụ ọrụ na nta zuru ụwa ọnụ ụbọchị nke Nonviolence kemgbe ha bụ nwata, na ụbọchị ọ bụla na-arụ oge metụtara ụbọchị nke udo na Nonviolence, dị ka mba ụbọchị megide ime ihe ike 25 November, na Ụbọchị 2 nke ọnwa Ọchịchị na-adịghị na udo ma ọ bụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nke ime ihe ike na mmegide.
19 November ụbọchị ụwa n'emeghị ihe ike megide ụmụ na ntorobịa
Na November 19 bụ ụbọchị nwatakịrị na ntorobịa, e bu n'uche iji mee ka a hụ mmegbu a na-emeso nwata. Ọ bụ na afọ 2000 mgbe a họpụtara nke a taa na ndabara iji mee ka United States mee ngwa ngwa ma dị irè. Tụkwasị na nke a, a na-eme ememe ncheta na November 20 na mmekorita na International Children's Day.
A na-eji ụbọchị a na-eme ihe ike maka ụmụaka iji mata ihe bụ usoro kachasị maka ịme ụmụaka na ngwá ọrụ ndị ha nwere ike iji bulie mgbịrịgba mkpu nke ndị okenye a tụkwasịrị obi gburugburu ha.
Ụbọchị zuru ụwa ọnụ nke enweghị nkwenye na igbochi mmegbu na iyi egwu
Mmegbu na nrigbu ụmụaka na ndị na-eto eto bụ nsogbu na-emetụta mba niile n'ụwa nile. Ọ bụ na ụdị mmegbu a adịghị amata ọdịiche nke agbụrụ, mba, omenala ma ọ bụ ọnọdụ mmadụ.
na ikpe mmegbu na ime ihe ike megide ụmụntakịrị emeela ọtụtụ narị òtù na usoro gọọmentị ịmalite ime ihe, mejuputa usoro mmụta na mkpuchi, nke mere ka a mara ọkwa ndị a ma nwee ike ịmepụta usoro iwu maka ime ihe niile: ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ nkụzi dị ka ebe ntụrụndụ .
Ndị na-egosi ụmụaka ime ihe ike
Ndị ọkachamara mere ndepụta nke ihe na-egosikarị ụmụaka na ndị na-eto eto mgbe ha na-ata ahụhụ ma ọ bụ na-emegbu ha:
Mgbaàmà nke anụ ahụ: imebi akụkụ ndị mara mma, dịka ọbara ọgbụgba, mbufụt ma ọ bụ ọrịa.
Mgbaàmà nke ọrịa uche: egwu, phobias, ụra nlọghachi, ụra zuru oke. Omume ọjọọ ma ọ bụ nkwụghachi azụ na nkà ndị nweworo.
Mmekorita nwoke na nwanyi, mmekorita nke ulo na nke ulo akwukwo, ihe omumu nke ulo akwukwo.
A haziri ntuziaka a ka ndị òtù ezinụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ndị nkụzi nwee ike ịchọpụta ihe mgbaàmà kachasị nta nke mmegbu na-enweghị nkwụsị ịgwa ha banyere ya.
Nkwupụta ikpeazụ na ụbọchị nke ime ihe ike megide enweghị ike
N'ụzọ dị mwute, o yiri ka oge niile bụ mba ụbọchị nke ime ihe ike, n'ihi na nke niile esemokwu na-adị n'ụwa, na ihe nile abuses niile ọha mmadụ, ma ha na-atụle mepere anya ma ọ bụ.
Dabere na ọdịbendị nke mba ọ bụla na ọganihu ma ọ bụ nkwụghachi azụ na ikike ndị ọ nwere, a pụrụ ịhụ ụdị ime ihe ike dị iche iche. Ọtụtụ ndị nwere ike iche na n'obodo ndị mepere emepe ọ gaghị adị mkpa ime ememe ụbọchị ụwa megide imeghị ihe, n'ihi na ha chere na ọ dịghịzi adị ma ọ bụ na ọ dị ntakịrị ma ọ bụ kwesiri.
Ma ọ dị mwute ikwu na ọ bụ nke ahụ, ime ihe ike bụ akụkụ nke mmadụ, na ikpochapụ ya na ọ dị mkpa iji mara na ọ dị adị, na-eme ka a hụ ya na ihe ọ na-abịa na ìhè, na ihe a na-ewere ime ihe ike.
Spain na-eduga njem ụwa maka ụbọchị ụwa nke enweghị nkwenye
Spain bụ mba a na-atụle ụwa mbụ na ọchịchị ọchịchị nke ọchịchị onye ọchịchị, ya na iwu nke na-eche na ọ na-echebe ma na-enye ụmụ amaala ya ikike.
Ma nke bu eziokwu bu na n'oge nile n'akụkọ ihe mere eme nke mba a, enwere otutu ihe ike, ma ihe doro anya. Ime ihe ike n'ime obodo (ụbọchị 25 November) bụ otu n'ime isi ihe isi ike ndị na-eme ka ọha mmadụ a.
O nweela oge nke iyi ọha egwu na-eyi ndụ ndụ nke ndị bi na ya egwu. N'etiti mkpesa omume nke kacha nchegbu na kemgbe ozugbo iji anya nke uche a na 1 October ime ihe ike na ada itie ke Catalonia, n'ihi na nke referendum na truncated site nche agha onye ike tiri ụmụ amaala. N'ihi nke a, Ụbọchị Ụwa nke 2017 Na-enweghị Nta Ọ dị ezigbo mkpa.
Ọ bụrụ na ị na-atụle na Spain bụ otu n'ime ndị kasị mepere anya ọha mmadụ, na n'agbanyeghị nke a, ọtụtụ ẹma ẹsịn na ikike na-emesi obi ike nke ndị mmadụ n'otu n'otu na-mere, ọ dị mfe iche na-eme ná mba ndị ọzọ na ala etoju ma ọ bụ ọ ochichi onye kwuo uche ma ọ bụ merie n'agha ahụ.
N'ihi ihe ndị a nile, e nwere òtù ndị na-akwalite ọgụ maka ikike nke ndị mmadụ, dịka ọ bụ World March maka Udo na Nnochi Obi, na-arụ ọrụ site n'afọ ruo n'afọ, na-eme ka ndị obodo na ndị gọọmenti mata na ọ dị mkpa ka ha ghara ime ihe ike.